Global Voices tao anatin’ny adihevitra momba ny fanaovangazety mandehandeha ao Môzambika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2019 7:24 GMT
Ny 31 Martsa 2015 no natao, ary natrehan'i Borges Nhamirre, mpanao gazety sy mpikaroka ao amin'ny Center for Public Integrity ny adihevitra momba ny fanaovangazety amin'ny finday tao Mozambika, nokarakarain'ny IREX tao anatin'ilay fandaharanasa ho fanamafisana ny media. Izaho (Dercio Tsandzana) no nisolo tena ny Global Voices, ka tao no nizaràko ny traikefako sy ny fomba fanaovana asangazety. Nilaza i Borges Nhamirre fa zavatra sarotra ny miresaka asa fanaovangazety ao Mozambika noho ireo fepetra misy sy manankery ao amin'ny firenena.
Nilaza ny iray tamin'ireo mpanao gazety miofana ao amin'ny Oniversite Eduardo Mondlane ao amin'ny Sampana Fifandsraisana sy Zavakanto ( ECA ) hoe:
Alexandre Zandamela avy amin'ny Citizen's Eye nilaza hoe: ny fanontaniana tokony hazavaina no tokony hohazavaina eo amin'ny resaka asa fanaovana agazety sy ny hoe mpanao gazety, satria misy fifanjevoana eo amin'ireo hevitra.
@ tomqueface : Tokony hisy rafitra iray ho fanazavana ny rakibolan'ny atao hoe mpanao gazety, sy olontsotra-mpanangona vaovaoI.
Notanisaina ho toy ny ohatra iray tena nahomby indrindra erantany ny Global Voices noho ny fahafahany mamorona ny vaovao amin'ny alàlan'ireo fanehoankevitra sy zavatra avoakany. Misy ihany koa ny dindon'ny GV tao anatin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ireo hetsika goavana izay namorona habaka fandraisana anjaran'ireo olontsotra. Ny Vovonana tany Filipina dia natao ho ohatra amin'ny fomba ataon'ny GV hanangonany ireo mpiaramiasa aminy erantany.
1 ora izayHafanàm-po nomerika